Xayawaannada ugu dhifka badan adduunka: astaamaha iyo xiisaha | Cusbooneysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | 29/04/2021 09:06 | Deegaanka
Dabeecaddu waligeed ma joogsanayso inay naga yaabiso. Waxaa jira xayawaanno badan oo ajaanib ah oo adduunka ku baahsan oo aan aad u soo noqnoqon oo cid walba ka yaabin kara. Mid waliba wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah oo naadir ah. In kasta oo ay jiraan kumanyaal nooc oo naadir ah, haddana waxaannu isu soo ururin doonnaa xayawaanka adduunka ugu dhifka ah iyada oo loo eegayo astaamaheeda gaarka ah iyo joogitaanka dabeecadda.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegeynaa kuwee xayawaannada adduunka ugu dhibka yar, degaankooda iyo astaamaha ugu waaweyn.
1 Xayawaanka ugu dhifka badan adduunka
1.1 Kalluunka cakiran
1.2 Yeti carsaanyo
1.3 Membracid reer Brazil
1.4 Boqorka Chlamydia
1.5 Xayawaannada ugu dhifka yar adduunka: bar-xiddigle sanka
1.6 Deerada biyaha Shiinaha
1.7 Xayawaanka adduunka ugu qaalisan: axolotl
1.8 Cayaaraha Vampire
Shuruudaha lagu doorto xayawaannada ugu dhifka yar adduunka waa soo noqnoqoshada iyo badnaanta nidaamka deegaanka. Way fiicnaan kartaa maxaa yeelay waxay kaliya muuqdaan nidaamyada deegaanka aad u layaabka leh ama xaaladaha gaarka ah. Waxay sidoo kale noqon kartaa sababtoo ah muuqaalkeeda oo leh astaamaheeda gaarka ah. Intooda badan intooda badan waxaa lagu heli karaa qaab dhif ah qaar badana waxay halis ugu jiraan dabargoyn. Aan aragno waa kuwee xayawaanada ugu dhifka badan adduunka iyo astaamahooda:
Waxaa sidoo kale loo yaqaan magaca kalluunka dhibicda waxaana loo codeeyay xayawaanka ugu foosha xun adduunka dhowr sano ka hor. Waa xayawaan ku nool moollo aad u tiro badan hilibkiisuna wuxuu leeyahay muuqaal u eg sida Jelly. Tani waxay samaysaa goorta waxaa laga soo qaadaa badda banaanka markii la qabto waxay leedahay muuqaal jelli u eg. Nasiib darrose waxay ku nooshahay aargoosatada markii kalluumeysatadu isku dayeen inay soo qabtaan aargoosatadaas, waxay soo qaateen xoogaa kalluun dhibic ah intii ay socdeen.
Waxay leeyihiin jidh noocan ah oo ah geeddi-socod la-qabsashada isbeddelka ah ee cadaadiska iyo xaaladaha heer kulka badda. Tani waxay ka dhigeysaa mid aad u jilicsan marka ay kor ugu kacaan dusha sare ee jirka.
Xayawaannada adduunka ugu dhif iyo naadir ah waxaan helnay mid ka mid ah 2006. Waa qolof jireed oo ku nool badda moolkeeda una qaata naaneysta ah in ay leeyihiin xariirro jirka ku jira oo bakteeriyo ku nooshahay. Waxaa loo maleynayaa inay tahay a nooc iskudhaf ah oo iskudhaf ah oo carsaanyo ayaa si tartiib tartiib ah iyaga ugu quudisa waxayna leeyihiin guri. Waxay ku lammaan yihiin carsaanyo fara badan, inkasta oo cilmi-baarayaashu ay go'aansadeen inay abuuraan qoyskooda si ay ugu awoodaan inay u kala saaraan qolofleydan sida ay u kala duwan yihiin. Ma jiraan wax xog ah oo la bixiyay oo ah in naadirnimada xayawaankani ay aad u daran tahay.
Membracid reer Brazil
Waa mid ka mid ah cayayaanka dhifka ah ee jira oo ka tirsan hiddo-wadaha Bocydium. Waa nooc cayayaan ah oo ka tirsan qoyska Membracidae iyo Waxay leedahay 14 nooc oo loo qaybiyo Latin Amerika iyo Afrika oo dhan. Cayayaankaasi wuxuu leeyahay madax gaar ah oo u qaabeysan sidii diyaarad helicopter ah. In kasta oo ay umuuqato mid hanjabaad leh, haddana dhib uma leh aadanaha. Cabirkiisu ma gaarayo nus sentimitir waxayna badiyaa ku quudisaa dheecaanka dhirta ammaanta.
Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa qorraxda jilicsan waana nooc xayawaan qiroweyn ah oo laga helo oo kaliya New Guinea iyo waqooyiga Australia. Waa xayawaan soo jiito dareen badan maaddaama oo uu leeyahay xuub qoorta ku wareegsan oo u soo baxa si uu u yeesho muuqaal ka hanjabaad badan iyo inuu shukaansi la yahay dheddigga. Waxay awood u leedahay inay ku socoto xawaare sare waxayna leedahay awood fiican oo lagu ugaadhsado cayayaanka. Dhererkiisu waa 90 sentimitir.
Ku saabsan dhaqanka, waxay u taagan tahay shukaansigooda ayaa si aad ah u sharaxay markay foorida iyo qoob-ka-ciyaarka dhaddigga ku dhex jiraan.
Xayawaannada ugu dhifka yar adduunka: bar-xiddigle sanka
Waa xayawaan la xidhiidha jiirarka, laakiin waa kooxda ugu dhifka yar adduunka. Waa naasley yar oo ku nool Waqooyiga Ameerika oo leh sanka oo leh 22 teendhooyinka wareega oo casaan ah. Waxaa loo isticmaalaa in lagu soo qabto ugaadhsiga, inta badan cayayaanka iyo mooska yaryar. Muuqaalku waa natiijada la-qabsashada isbeddelka noloshiisa dhulka hoostiisa. Thanks to noocan ah isbeddelka iyo la-qabsashada, waxay leedahay ciddiyo oo waxaa lagu siiyay awood dareen sare leh. Oo iyagu waa gebi ahaanba xayawaan indha la '.
Seynisyahannada daraasaddan ku sameynaya xayawaankan oo u arka inay aqoonsan karaan dhaqdhaqaaqa korantada ee ugaadhsiga si ay ugu qabtaan dhaqso dhaqso ah.
Deerada biyaha Shiinaha
Waa deero faan-fiiq leh oo leh noocyo dhawr ah. Baaxaddiisu waxay ku saabsan tahay qaybta hoose ee Yangtze Basin ee u dhexeeya Shiinaha iyo Kuuriya. Waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay Faransiiska iyo Boqortooyada Ingiriiska. Waa xayawaan aad u yar haddii aan isbarbar dhigno cadeymo kale. Sidoo kale ma haystaan ​​kudka. Farqiga ugu weyn ee ka dhexeeya cawsha guud waa horumarinta meerisyada. Dhulalkaas aadka u horumarsan, wuxuu sifiican ugu nadiifin karaa togagga iyo khudradda qeyb ka ah cunnadiisa. In kasta oo ay horumariyeen meerisyo, waxay leeyihiin cunno geedo yaryar leh.
Xayawaanka adduunka ugu qaalisan: axolotl
Xayawaannada ugu dhifka yar adduunka waxaan leenahay axolotl, oo horeyba looga yaqaanay adduunka iyada oo loo marayo shabakadaha bulshada. Waa amphibian reer Mexico ah oo qatar ugu jirta baabi'inta. Xaaladdaan halista ah waxaa u sabab ah wasakhaynta biyaha ay ku nool yihiin. Waa xayawaan leh tayo gaar ah oo neoteny ah. Tan macnaheedu waa shakhsiyaadka qaangaarka ah inay hayn karaan sifooyin badan oo ay leeyihiin markay shiilyaan. Waxay awood u leedahay inay sii joogto sidii iyadoo la qaboojiyey dhalinyaro weligeed muuqata.
Ma jiro wax ka badan magaca, waxaad horeyba u qiyaasi kartaa sida xayawaankani u yahay naadir. Waa nooc naadir ah oo ka mid ah cephalopod oo ku nool biyo aad u qoto dheer. Sidii aan awoodnay inaan u ogaanno, xayawaanno aan caadi ahayn ayaa ku soo kordha moolka. Waxa xayawaankan ka dhigaya kuwo aan caadi ahayn oo dhif iyo naadir ah ayaa ah awooda isku-duubashada nafsadeeda. Lakabka maqaarka ee isku xira 8-da teendhooyin si uu noo tuso waji kale.
Waxay leedahay xubin sawir-qaade ah oo awood u leh soo-saarista iftiinka isla markaana si fiican u maarayn kara. Waxyeello uma laha aadanaha waxayna leeyihiin cabir aad u yar oo keliya 30 sentimitir.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto xayawaannada adduunka ugu dhif iyo waxa astaamahooda ugu waaweyn ay yihiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Xayawaanka ugu dhifka badan adduunka